Madaxweyne Trump oo xil ka qaadiis lagu sameynaya . – iftiin fm
Madaxweyne Trump oo xil ka qaadiis lagu sameynaya .
January 14, 2021 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Xubnaha aqalka mareykanka ayaa mar kale soo jeediyeen in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha ee dalkaasi Donald Trump kadib markii ay u codeyeen inta badan.
Afhayeenka Kongreska, Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah ayaa shacaisay in markale aqalka ay hogaamiso uu soo jeediyay in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump, waxaana xil ka qaadistiisa loo gudbinayaa aqalka sare ee Mareykanka.
← Culimada Garissa oo loogu baaqay in ay qeyb ka noqdaan xalinta qilaafaadka Dhulka
George Natembeya oo boqday deegaanka Bureti . →